Thola ukuthi yiziphi izinyathelo zokuphakamisa i-Yorkshire enobudlova | Izinja Umhlaba
Kuvamile ezinjeni ukuthi ukuntuleka kokuzihlanganisa nabanye, izimo ezidala ukucindezeleka nemfundo embi kwazise ziyimidlwane, kungumsuka we izinkinga zokuziphatha kanye neziqubu eziphindaphindayo zodlame ukuthi ngaphezu kokungathandeki kungaba nemiphumela emibi kuwe nakwisilwane esifuywayo.
Sizokhuluma ikakhulukazi ngalolu hlobo lokuziphatha okunenkinga ezilwaneni ezifuywayo ezincane ezifana Yorkshire nokuthi ungamfundisa kanjani ukuthi aziphathe kahle. Lesi silwane esincane esizalanayo ngokuvamile kulula ukusiqeqesha futhi uma senziwe kusenesikhathi, kuqinisekile ukuthi Ngeke ikunikeze noma yiluphi uhlobo lwezinkinga zokuhlukumezeka.
1 I-Yorkshire kulula ukuyiqeqesha
2 Yini eyenza izinja zibe nolaka?
3 Kufanele unake imininingwane nokunakekelwa kwabo
4 Yini okufanele uyenze lapho i-Yorkshire terrier inolaka emndenini wakho nakwabanye abantu?
4.1 Uma inja ivikela lapho usondela ezikhaleni zayo
I-Yorkshire kulula ukuyiqeqesha
Kodwa-ke, kungahle kube nezimo ezithile ezenza ukuthi kube nokuziphatha okubi kulama-canine amancane, okunye ukungabi khona komphakathi noma ukuthi lokhu kusingathwe ngendlela engafanele kanti okunye ukuthi ngike ngabhekana nezimo ezihlukumezayo okuholela ekuziphatheni okunolaka okunzima ukukuguqula.
Njengomnikazi wenja, kubalulekile ukuthi uyibone uma ngabe ikhombisa izimpawu zodlame ngaphakathi endlini namanye amalungu omndeni noma ngabe bahlala nsuku zonke, nabantu ongabazi futhi nakwezinye izinja. Uma kwenzeka wethula izimpawu zokucasulwa nokuquleka, kubalulekile ukuthi uthathe izinyathelo ezisheshayo eziholela enqubeni yokufunda kabusha inja.
Lezi zenzo zizokusindisela ikhanda eliningi esikhathini esizayo futhi zizovimbela inkinga ekuthatheni ubukhulu obukhulu futhi ngenxa yalokho kuzoba nzima kakhulu ukukuqeda. Sifuna ukugcizelela ukuthi ukuqeqeshwa kwangaphambi kwesikhathi ngenja encane yokuzalanisa kanjena, futhi nokuningi lapho kunezingane ekhaya, kubaluleke kakhulu, kepha uma kusaletha isimilo esithile endaweni, naka ukuthi sizokunikeza izincomo zokuthi ungaziqeqesha kanjani.
Yini eyenza izinja zibe nolaka?
Kufanele uqonde okokuqala ukuthi iziphi izindlela zokuziphatha ezinolaka ngempelaIsibonelo, uma inja ikhonkotha noma igquma ngezikhathi ezithile, akusona isilwane esinolaka. Manje lapho ejwayele ukuletha ushintsho olungazelelwe ekuziphatheni kwakhe, ahlasele abantu, ezinye izinja futhi aze alume, kucacile ukuthi sibhekene necala elisobala lokuba nolaka kwenja.
Lezi zimo zengqondo zenja zinemisuka eminingana:
Ukuxhumana nomphakathi okulungile kuyisihluthulelo ezinjeni, lapho bekunganele, kungekho noma kungenziwanga ngendlela efanele, kuzodala izinkinga zokuziphatha. Lokhu kuqukethe inqubo yokuxhumana nabanye abantu, nezinye izinja noma ezinye izilwane ezifuywayo nakho konke okuzungezile.
Inqubo kumele yenziwe kusukela ebuncaneni ukuze bafunde ukuthi siyini isikhala sabo ezindaweni ezahlukahlukene abasebenza kuzo, abazokwenza kancane kancane.
Ezimweni lapho inja edlulise inqubo yenhlalo ingakhombisa indlela yokuziphatha enolaka:
Ezimweni ezidala ukukhathazeka.
Ngenxa yokuhlukumezeka okuthile okwenzekile.
Enye inkinga yezempilo.
Wayengenabo ubudlelwano obenele.
Endabeni ethile ye- I-Yorkshire Terrier, imayelana umhlobo obekade usetshenziselwa ukuzingela esikhathini esedlule futhi mhlawumbe le mvelaphi ingaba nomthelela ekuziphatheni okuthile okunolaka okuvele kungazelelwe kulaba abancane.
Futhi manje nje lapho sisho leli gama elihlobene nosayizi walo omncane, lifike ngesikhathi usho ukuthi abanikazi abaningi baseYorkshire bavame ukutotosa futhi babavikele ngokweqile futhi lokhu ngokungangabazeki kuholela ekuziphatheni okubi esilwaneni njengoba kuzizwa kusesimweni sokuthatha izikhala lapho sikhona. Lolu hlobo lokuziphatha kulula kakhulu ukuluqeda uma kumane kuyimidlwane, uma selukhulile luyinkimbinkimbi ngokwengeziwe kepha ngokuqeqeshwa nokuzinikela kutholakala imiphumela emihle.
Kufanele unake imininingwane nokunakekelwa kwabo
Inja yakho izokunikeza izimpawu ezicace bha zokuthi ukuziphatha okungathandeki kuyeza, kufanele nje unake futhi uthathe isinyathelo ngokushesha, ngokwesibonelo nalapho isilwane sakho singaqedi ukuzivumelanisa nesimo saso ngaphakathi kwesikhundla sendlu, uma lokho kwakha ukuhlukunyezwa nokumemeza ngokuqhubekayo noma uma imvelo ngokuvamile idala ukukhathazeka okukhulu noma ukucindezeleka, udinga ukuthatha isinyathelo.
Kodwa-ke, ngaphansi kwale mibandela akunakwenzeka ukuyifaka ekuqeqesheni ngakho-ke ngeke ifunde ukusebenzisana nabantu noma nezinye izinja. Ngaphambi kokuqala ukuqeqeshwa, kubalulekile ukuhlinzeka ngemvelo yokuzinza kanye nokuthula okungenani kwezinsuku ezingama-30 eziqhubekayo, kungaleso sikhathi kuphela lapho angakulungela ukuqeqeshwa.
Okuhlangenwe nakho okungekuhle nabantu noma amanye ama-canine kungasabisa, ngisho nokuziphatha okunodlame noma ukukhonkotha kungaba ngumphumela wokwesaba. Njengomnikazi wesilwane kumele ube nesimo sengqondo sokuzola futhi kubaluleke kakhulu ukungamphoqeleli ukuthi enze noma yini amelana nayo. Vumela isilwane sakho siphelelwe ukwesaba nokuthi ngokuthanda kwakhe uyasondela kwezinye izinja, ngaso sonke isikhathi ngaphansi kokulawula kwakho ukugwema izimo ezingathandeki.
Ukuzibandakanya komphakathi yinto esemqoka ezonquma izindlela eziningi zokuziphatha kwenja, ezingcono noma ezimbi. Eqinisweni, uma engafundi ukukhuluma ngokuphepha, uzokwethula ukukhathazeka okukhulu, ingcindezi futhi abe nolaka kubantu nasezilwaneni ezifuywayo. Lapho zisesikhathini sokushisa kunezinja eziba kancane zipholile nabanye, ikhambi ngukuvala inzalo yesilwane bese ngaleyo ndlela siyeke ukuba nolaka nabesifazane ngokushisa noma ezinye izinja zobulili obuhlukile.
Ukunakekelwa okuyisisekelo kweYorkshire Terrier
Yini okufanele uyenze lapho i-Yorkshire terrier inolaka emndenini wakho nakwabanye abantu?
Lesi ngesinye sezithiyo ezinkulu okufanele sisinqobe uma sifuna ukuthi isilwane sihlale siyingxenye yomndeni, ulaka kubantu, noma ngabe umndeni noma umuntu wesithathu uyinkinga enkulu. Ngaleyo ndlela udinga ukukhomba izici ezithile ezizokusiza ukuzixazulula.
Uma inja ivikela lapho usondela ezikhaleni zayo
Ukuqonda ukuthi ziyini lezo lapho adla khona, lapho alala khona noma ajwayele ukudlala khona. Uma kuthi lapho besondela aqhume, ungamemezi, ungamshayi noma umjezise ngoba evikela isikhala sakhe, inhloso ukusebenzisa izindlela ezinhle zokuqinisa, lezo zokulalela okuyisisekelo nazo ziba wusizo olukhulu ukumsiza athuthukise lokho kuziphatha. Lokhu kwesaba kubanga ukuthi inja iziphathe ngendlela engafanele ngenxa yokuhlukumezeka, nabantu abathile noma nabantu bebonke, noma ngabe bavela endaweni yabo noma cha.
Uma uhlukumeza inja yakho kaninginingi, uyishaye uyiklabalase, ngokuhamba kwesikhathi uzoba nolaka olungenathemba nawe nomndeni wakho. Akumukeleki ukuthi ukhuthaza ukungaziphathi kahle ngale ndlela. Ungenza isiteshi sakho senja ukukhathazeka komzuzwana wokungezwani obheke kumuntu osondele kakhulu, okunguwe. Ngakho-ke uma ikhonkotha ngokwesaba nangokuphikelela kwezinye izinja noma abantu, kungcono ukusuka kule ndawo ukugweme ukuthi kugcina kukulumile.
Indlela ephelele ye-athikili: Inja yomhlaba » Izinja ezijwayelekile » Ukuziqeqesha » Ungayiqeqesha kanjani iYorkshire enolaka